Mar’uun ii jawaab!!! :Qoraalkii 6aad ee Cabashada ay Duqayda Deegaanka Dila u Qoreen Golaha Guurtida iyo M/xigeenka « SAWNEWS NETWORK
« MASAAJIDKA ABUU HUREYRA EE KU YAALA MAGAALADA BOORAMA OO NOQDAY MASJIDKII UGU HOREEYEY EE DHAGOLAYAASHA LOOGU TARJUMO KHUDBADA JIMCAHA
Munaasibadda Lagu Xidhay Sanad Dugsiyeedka Waxbarashada Dugsiyada Al-Aqsa oo Shalay Lagu Qabtay Boorama »
Mar’uun ii jawaab!!! :Qoraalkii 6aad ee Cabashada ay Duqayda Deegaanka Dila u Qoreen Golaha Guurtida iyo M/xigeenka
Posted by Sawnews.tk on June 6, 2009
Ku: Gudoomiyaha Golaha Guurtida JSL Hargaysa
Ku: M/wayne ku-xigeenka JSL Hargaysa
Og: Ergeda Guurtida kala baydh
Og: Gudoomiyaha G/Awdal Boorama
Og: Wasaarada Arimaha Gudaha Hargaysa
Og: M/waynaha JSL Hargaysa
Ujeedo: Tabasho iyo Cabasho waana tii Lixaad
Warqaddan oo ah tii lixaad (6aad) oo toos iyo ogaysiisba ugu socota Hay’adaha Dawliga ah ee ugu sareeya JSL oo ay khusayso arintan murugsan ee ka taagan xaaladan aloosan ee ay wadaan ergada guurtida kala baydh mudo ku siman shan bilood waxaa nasiibdaro ah haba yaraatee wax jawaab ah aanan ka helin dhamaan Hay’adihii Qaranka ee arintan u xilsaaran anagoo samaynay codsiyo badan. Tabashadan iyo Cabashadan Lixaad waxay muujinaysaa kuwii ka horeeyey waana sidan:-
Warqadda Cabashada ee Koowaad Taariikh 16/03/2009 waxay muujinaysaa ilaa maanta in anaan nalaga qancin waxaan dalbanaynay oo cabasha ah.
a) in labada beelood laga saxiixo ballan qaad nabadeed (Bond), dhaartii dabadeedna waxay soo weerareen dhinacii kale oo dhaartii iyo nabadayntiiba jabiyey iyagoo si gaadma ah laba (2) qof ku dilay, arintaasna ergada guurtidu waxba kamay qaban waxayse banaysteen inay been cad ku daboolaan, waxay yidhaahdeen nabadii labada dhinacba way jabiyeen iyagoo ka been sheegaya xaalada qarinayana runta.
b) In lakala diro labada ciidan beeleed. Iska dhaaf in lakala diro ee ma jirto maalin ay maanta ka ciidan iyo baaxad wayn yihiin iyagoo waliba uu ciidankii Qaranku uu joogo oo aanan awood loo siin in uu kala ka xeeyo kuwaas baadilka isku soo urursaday ee ah ciidan beeleedka uu wato Maxamuud Muxumed Raage.
c) In laga heshiiyo in lagu kala baxo arimaha dilka iyo dhaawaca. Ergada guurtidu anagoo diidan waxay goosatay in la is dhex wado arimaha oo waliba culayska la saaro arimaha dhulka. Warqada Cabashada labaad Taariikh 19/03/2009 waxay sheegaysaa cabasho culus oo ku wajahan ergada guurtida oo ah in afduub nalagu hayo, hadalkayaguna aanu lahayn wax tixgalin ah balse dhinaca kale toos loo buun buuninayo.
a) waxa ergada guurtidu go’aansaday anagoo diidan in heerka colaada ee joogay Reer Maxamuud Nuur iyo Reer Xareed lagu fidiyo oo loo xawilo lana gaadhsiiyo heer sare J/Abokor, Sacad Muuse illaa Habar Awal si colaadii lagu yiqiin Gobolada bari loo soo wareejiyo dhinaca Gobolada Galbeed.
b) Waxa ergada Guurtidu si cad oo badheedh ah u horjoogsatay in madasha la keeno oo la dhaariyo lagana soo qayb geliyo nabadna lagu soo dabaalo dhammaan dadka nabadu ay ka go’ayso sida hogaamiyaha ciidan beeleedka Maxamuud Muxumed Raage isagoo hada u muuqda dawlad yar oo ka hoos abuuran dawlad.
Warqada Sedaxaad Taariikh 02/05/2009
a) warqadan waxay Qeexaysaa qodobo khuseeya sharciga, Qodobka (25aad) ee axdiga qaranka, Qodobka 61aad iyo 28aad ee distoorka JSL oo waliba uu kaabayo qodobka 68aad ee xeerka habka madaniga oo dhamaantood sidii horeba aan u cadaynay aanay habayaraatee ergada guurtidu awood sharci u lahayn inay galaan xukun dhul balse sharcigu u banaynayo ergadan wax ka qabashada Nbadaynta, Dhaqanka iyo Diinta. Waxa muuqata oo iska cad in heshiis afgarad ah uu ka dhaxeeyo dhinaca kale oo loogu fulinayo arimo baadil ah oo aanu distoorku fasaxayn ama aanu ogolayn, taasi waxay tahay in-qilaab lagu samaynayo distoorka.
b) Xukunka noocaas ah sharci ahaan gelistiisa ergada guurtida ee fadhida kala baydh iska dhaafe waxaa ka reeban dhamaan golaha guud ee guurtida qaran balse distoorku wuxuu awood buuxda u siinayaa qaadistooda maxkamadaha qaranka iyo Dawlada, ciddii isku qaada waxaan sharcigu u banaynin waa baadil waana dad iyo dal biis waana sida arintu ku socota hadda.
Warqada Cabashada (4aad) Taariikh 09/05/2009 waxay muujinaysaa kalsooni bixin markii labaad.
a) kalsoonidan waxaan ku siinay Ergada guuritida anagoo raacayna awooda sharcigu siiyey oo ah inay galaan nabadaynta dhaqanka iyo diinta oo kaliya.
b) Balse marnaba kumaanan raacin oo maanaan ogolaan inay galaan wax aanu distoorku siinin angoo si buuxda u diidan waxay nagu hayeen habjabaad, ju’juub, afduub iyo aflagaado kale sidaa nabadiid iyo gardiid iyagoo nagu dhaleecaynaya inaan kibirsan nahay, runtii waxaan ku hoos jirnaa amar ku taaglayn iyo dhaqan diktatoor.
Warqada (5aad) Taariikh 30/05/2009 markii ugu horaysay waxan warqadan toos ugu dirnay iyadoo ku socota Gudoomiyaha Golaha Guurtida Ee Qaranka JSL.
a) warqadan waa codsi ah soo fara gelin arintan cakiran anagoo soo gudbinnay wax tabasho iyo cabasho oo codsanayna in arinta lagu soo dabaalo tubtii nabadu ku dhalan lahayd.
b) Waxaan gudoomiyaha Golaha Guurida Qaranka si xushmad leh uga codsanay in isaga qudhiisa arintan soo fara geliyo si looga baxo cakiraada isagoo raacaya sharciyada uu ku dhisan yahay isaga iyo golahiisuba.
c) Cabashadan waxay ka digaysaa hadii aan laga hortagin arintan gurmad qaranna loo fidin inay si degdeg ah dagaal u bilaabi doonaan dhinaca kale iyagoo ergada guurtidu ku fashilantay arinta oo isku soo koobtay kaliya arimaha dhulka isla markaana ku dhiirran inay nagu ridaan xukun baadil ah oo dhinac kaliya ka raran.
Waxaan madaxda sare ee Hay’adaha Qaranka ka codsanaynaa inay xaaladan cakiran soo fara geliyaan oo ay u soo diraan gurmad Qaran si loo badbaadiyo nabada ay ku naalooto Qaranka Curdinka ah ee Soomaaliland taasoo aan ku baaqayno hadii nabad aan dariskayaga ka wayno in aanay dhibaatadu anaga oo kaliya nagu koobnaan doonin balse ay gaadhi doonto meelo kale oo badan waayo qofna ma dugsanayo dayr xadiid ah.
Waxaan cod dheer iyo mid gaabanba ugu sheegaynaa dadwaynaha guud, Salaadiinta, Cuqaasha, Siyaasiyiinta iyo waxgaradka JSL inay arintan waqti badan ku qaataan hoosna ugu dagaan dulucda iyo culeeyska xaaladan cakiran ay mudan tahay waxaan kaloo sheegaynaa in hadii Qaranka JSL aanu siin arintan mudanka ay u qalanto ay saamayn culus oo guuldaro keenta ku yeelan karto Qaranimada Soomaaliland.
Ugu dambayn waxaan u soo jeedinaynaa dadka reer Soomaaliland iyo madaxdooduba in gudoomiyaha ergeda kala baydh Maxamed Maxamuud Diiriye oo hada fadhiya kala baydh inuu isagoo cidina ku wehlinin iskii u qaatay go’aan uu ku xabisay ama ku xidhay (25-kii) xubnood ee ka socday beesha Reer Nuur isagoo ku qasbaya in loo hagaansamo taladiisa guracan taasina ay xad gudub ku tahay sharciga iyo Odayaasha Beesha.
Isla markaa isagoo ergada Reer Nuur u xidhan tahay wuxuu ku dhawaaqay in ay dacwadii iyo doodiiba soconayso oo aan cidna loo joojinaynin cidkasta oo madasha fadhida ama ka maqan balse ay joogeen beesha jibriil Abokor oo kaligood garnaqsanaya sidaasinah uu la ogyahay Gudoomiyaha Ergada Guurtida ee kala baydh.
A L L A A M A H A D L E H
1. Caaqil sare Daahir Xasan Xadi : ___________________
2. Caaqil sare Daahir Cabdi Bade : ___________________
3. Caaqil Ibraahim Ismaaciil Guuleed : ___________________
4. Caaqil Ismaaciil Ibraahim Mooge : ___________________
5. Caaqil Daahir Xuseen Sheekh : ___________________
6. Caaqil Maxamuud Muxumed Sh. Ismaaciil: _______________
7. Caaqil Maxamed Kaahin Nuur : ___________________
8. Caaqil Aw ciise Cabdi Colhaye : ___________________
9. Caaqil Muuse Axmed Xasan : ___________________
10. Cabdulaahi Cali Xuseen : ___________________
11. Cali Xaaji Xirsi : ___________________
12. Yuusuf Cabdilaahi Cali : ___________________
13. Cismaan Muxumed Aare : ___________________
This entry was posted on June 6, 2009 at 10:00 am	and is filed under News (Warka).